Ikhaya UMPHATHI we-FOOTBALL I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Ephelele yoMphathi Webhola owaziwa kakhulu ngeSiteketiso 'Pep'. I-Josep Pep Guardiola Childhood Story yethu kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF kanye ne-ON-Pitch amaqiniso amancane awaziwa ngaye. Akungabazeki ukuthi i-Pep ayiyona nje into eyaziwa njengomunye wabadlali abahle kakhulu esizukulwaneni sakhe. Ubhekwa kabanzi njengomunye wabaphathi bebhola lezinyawo ezidume kakhulu kule nkathi yanamuhla.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
I-Pep Guardiola Childhood Indaba
Josep "I-Pep" Guardiola Sala wazalwa ngo Santpedor, ESpain ngoJanuwari 18th, 1971 kuyise uValentí Guardiola, ungqimba lomzitini osetshenziselwe umhlalaphansi nonina uDorors Sala Guardiola, umuntu wokuthengisa. Wena wayengekho kokubili engcebweni njengalabo abathile besikhathi sakhe. Kwakuyibhola eyamdla kusukela ekuqaleni kokuqala.
Kusukela esemncane, u-Guardiola wakha umkhuba wansuku zonke wokushiya ekhaya ukukhahlela ibhola ngehora amabala ebhola lebhola lezinyawo eduze kwendlu kayise.
Njengoba ubaba wakhe ebeka, 'Kwakukhona njalo indlela eqinisekile yokumenza ajabule ngoKhisimusi futhi lokho kwakuzomnika ibhola njengamanje. Wayehlale enebhola ezinyaweni zakhe. Nomaphi lapho eya khona, wahamba nebhola lezinyawo uthi uSir Valentí Guardiola. '
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Abazali
Abazali bakaGudiodiola, uValenti noDorors, basaphila eSalpedor. Bathembisa ukuthi ngeke baphume emzaneni olele owasiza indodana yabo uPep 'ukuba iqale umsebenzi wakhe.
Abazali bakaPep Guardiola uMnu Valenti noMnuz Dolors Guardiola
Bobabili amaqembu ahlale ebonakala ehamba ndawonye encane encane UMasipala lokho amachashaza emaphandleni aseBrazil. Kuze kube yisikhathi, i-Santpedor iyakwazi ukuqashelwa emhlabeni jikelele enikezwa indodana yayo edume kakhulu 'Pep'. Ngokungafani nonina, ubaba kaPep uthanda ukunakekelwa abezindaba.
UMnu noMnuz Guardiola baye baziqhenya ngokuphumelela kwendodana yabo okubonakalayo ezithombeni nasezindabeni ezihlobisa ikhaya elihle ekhaya.
UValenti Guardiola ubonisa izikhumbuzo zendodana yakhe.
Ubaba wakhe, akayena nje owaziwa ukuthi uyamazwi kakhulu uma kuziwa ekuvikeleni indodana yakhe. Uyakujabulela ukuveza imibono ephikisanayo ezindabeni zebhola.
Ezinsukwini ezimbalwa nje I-Pep Guardiola ukunyuka okukhulu ku-Premier League kuqinisekiswe, ubaba wakhe wabe eseqede ibhola laseNgilandi "Ezimbi". U-Valenti Guardiola, uthe akuyona into eqhubekayo "Amabhola amade agijima".
UValenti uthe futhi: "Kufanele ngivume ukuthi i-English football ayiyona indebe yami yetiyi. Kuningi lamabhola amade asebenzayo. Ngithanda ibhola indodana yami ithanda ukuyenza - iningi lokudlula lapho ukuhlasela okumangazayo lapho kuvula imbobo yokuvula. "
UMnu Valenti Guardiola (Ubaba kaPep)
Umdwebi oqashiwe umhlalaphansi uValenti Guardiola wayekade esebenza kahle. Waqhubeka esebenza amahora angu-10 ngosuku kusukela ku-14 kumasayithi wokwakha futhi akazange ayeke kuze ngibe ngu-66. Akazange abe nesikhathi sokudlala ibhola njengoba indodana yakhe 'Pep' yenza.
Pep Guardiola Izingane Zendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Siblings
U-Pep unodade ababili asebekhulile nomfowenu osemncane, uPere, owaziwa kakhulu njengenye yezinsizakalo zebhola ezinhle kakhulu emhlabeni.
U-Pep Guardiola nomfowenu womntwana, uPere
U-Pere Guardiola uye wazenzela igama ebhizinisini le-football agent. U-Luis Suarez wakhe ube ngumthengi wenombolo yakhe eyodwa. U-Pep unabodade ababili okuthiwa u-Olga noFrancaca.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
U-Pep okwamanje ushadile noCristina Serra. U-Pep waba nalezi zingane ogama lakhe linguMarius, uMaria noValentine ngaphambi kokuba ekugcineni ekhathele umthamo womshado ku-2014.
Pep and Wife, uCristina Serra
Bashada kwakuwumkhosi ohlakaniphile owenziwa eCatalonia. Kwakukhona abangane abangcono kuphela.
Umndeni ojabulayo kaPep Guardiola.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuqala umsebenzi weBhola njengeBolboyboy
U-Pep Guardiola uqale indlela yakhe ebusweni bebhola njengo-master Camp Nouboy.
Wayengxenye yesakhiwo sikaBarca lapho uVenables efika njengomphathi emuva kwe-1984, futhi usevele ubonise izimpawu zokuthuthukisa ulwazi lwakhe lomdlalo.
Isithombe esitholakalayo ngezansi sikhombisa iPep yezinsuku ezingu-14 encane ebhiyozela nongqongqoshe waseNgilandi wangaphambili ngemuva kokuthi eqondise leli qembu kwisihloko saseSpanish
Ukuqala umsebenzi weBhola njengeBolboyboy
Abangane kusukela ebuntwaneni bakhe baveze ukuthi ngisho nangesikhathi esifushane, u-Guardiola ubelokhu ehlakulela ingqondo eyodwa kanye nokushayela okwenze ukuthi abe ngumphathi webhola lezinyawo emhlabeni. Lokhu kwaba unyaka ngemuva kokuqala umsebenzi wakhe webhola e-Barcelona youth academy.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi weBhola Wasekuqaleni
Umsebenzi webhola le-Pep Guardiola Early Football
Abaningi babhekisela kuye njengenkosi yomfana webhola owaphendukela kubadlali bebhola lezinyawo kanye nomphathi omkhulu webhola. U-Pep Guardiola wehlise ibhola lakhe ngeminyaka ngemuva kokuqala umsebenzi wakhe webhola e-Barcelona Youth Academy.
Uqale ukudlala umsebenzi e-Barcelona youth academy eneminyaka engu-13. Edlala njengomdlali wezempi, u-Guardiola waphawula umqeqeshi weqembu lokuqala uJohan Cruyff futhi wangena eqenjini eliphakeme ngesikhathi se-20. Waba umvikeli omkhulu kakhulu eqembu le-Catalan Dream lama-1990s abiza iziqu ze-6 La Liga, i-4 Spain Super izinkomishi, i-1 European Cup, i-1 UEFA I-Cup Winner's Cup no-2 UEFA I-Cups Super. Ngokuvamile wabonakala emidlalweni ye-479 eqenjini lezinkathi ze-12 futhi wabonakala njengomunye wabadlali bendawo abavikelekile kakhulu ngesikhathi sakhe.
Wadlala ngamagama amakhulu njengoRonaldo Luís Nazário de Lima, Xavi Hernández, UCarles Puyol, uRivaldo Vítor Borba Ferreira futhi lo mdlali odumile uLouis Enrique ongu-Barcelona Coach wamanje njengesikhathi sokubhala.
UPep Guardiola owayengumlingani weqembu e-Barcelona edlala izinsuku
Ube nobuhlobo obuhle no-Ex- manager uJoseph Mourinho ngesikhathi esengumdlali we-FC Barcelona. ISIPHUMA SOKUQAPHELA: UJoseph Mournho owayengumqeqeshi weBarcelona owayengumqeqeshi wamqeqeshela.
IPep Guardiola - Emuva ezinsukwini zikaJose Mourinho njengomqeqeshi wakhe
Kuyafaneleka futhi ukuphawula lokho UPep Guardiola noLuis Enrique bebebambisene nabo eBraça iminyaka emihlanu kusukela ku-1996 kuya ku-2001. Okuhlanganisiwe kuwubufakazi obungezansi;
UPep Guardiola noLuis Enrique eBarcelona
UPep Guardiola uthathe umhlalaphansi njengomdlali lapho isivumelwano sakhe neQatari club Al-Ahli siphele ngoJuni 2005. Waqala ukuthatha izifundo zokuqeqesha ngenyanga efanayo ngemuva kokuthatha umhlalaphansi.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -I-Barca yakhe yokuqala yokuphuma yayingeyona injabulo
Ngesikhathi u-Guardiola eshiya iBaern, uzonikezwa udumo olufanelekile, njengalapho ephuma khona eBarcelona ku-2012. Leli qembu liye lakhala ngenyanga yokulila lapho umqeqeshi ebazisa ukuthi uyahamba, kanye neqembu lonke kanye nomengameli, umqondisi wezemidlalo namalungu ebhodi abaya enkomfeni yakhe yokunyathelisa. Lalandelwa ngamavidiyo amaningi okukhokha kanye nenkulumo yokukhulumisana phambi kwesixuku esigcwele Camp Camp. Indlela okufanele ibe ngayo lapho umlando ushiya, ungaphikisana.
Kwakungeyona njalo ngaleyo ndlela. Lapho u-Guardiola eshiya uBarça njengomdlali ku-2001, wakwenza ngomnyango wangemuva, incognito. Ngomunye u-Ephreli ntambama wabamba umhlangano nomengameli-ke uJoan Gaspart ukumtshela ukuthi uyaphuma. "Nini? Khona manje?!" kwaba impendulo eshaqisayo. U-Guardiola uqinisekisile, wabe esetshela uGagpart ukuthi uzimisele ukubamba ingqungquthela yabezindaba ngosuku olulandelayo, ecela umengameli ukuba ahambisane naye.
Ukuphuma kokuqala kukaPep Guardiola okungakujabuli eBercelona
Njengoba kwenzeka, uGafpart wayesevele ebhalele iholide eSwitzerland okwakubonakala engenakwenzeka ukuphindaphinda, ngakho-ke akazange abe khona. U-Guardiola, oyinqola yezinhlamvu eziyisithupha ze-League kanye neNdebe YaseYurophu yaseYurophu yokuqala, ephule lezindaba abezindaba kuphela.
Ukuhlukana okungafaneleki komdlali obekwenzile kakhulu esikhungweni, bekuyizinto eziphambene nalokho ozozibona eNgilandi, izwe lePep liyakuthanda ngisho nangaleso sikhathi. "Angazi ukuthi ngizodlala kuphi okwamanje, kodwa nginesifiso samaqembu esiNgisi," U-Guardiola utshele abezindaba ngalolo suku ku-2001. "Bathembekile. Ngikhumbula okokuqala ngidlala e-Old Trafford. Kwakungavamile ".
Iphupho lakhe lokudlala eManchester United lancishiswa ngokushintsha okungazelelwe kwengqondo. U-Pep Guardiola uhambise ohlangothini oluncane lwe-Italian club, uBrescia Calcio.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Iqembu lokugcina njengomdlali
Yikholelwa noma cha, kodwa iqembu lokugcina i-Guardiola lidlalwa yilabo baseMexico abahlala eClub Social y Deportivo Dorados de Sinaloa. U-Pep wajoyina ingubo yaseMexico eneminyaka engu-34 futhi wadlala lapho cishe cishe isigamu sonyaka ngaphambi kokushiya ebhola lezemidlalo njengomdlali.
I-Pep Guardiola last club njengomdlali webhola lezinyawo
U-Guardiola ubanjwe eqenjini lomqeqeshi waseSpain uJuanma Lillo, ukunyakaza okunomqondo onjalo njengoba esesesikoleni sokuphatha eMexico ngaleso sikhathi.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo somsebenzi wokuphatha
Umsebenzi kaGudiodiola njengoba umphathi waqala eBarça B ngo-2007, kodwa eqinisweni wayesevele ehlangene nokuqeqesha ithimba lobuchwepheshe. Umsebenzi wakhe wokuphatha neqembu eliphezulu laseBrazil laqala ngo-2008.
Ngesikhathi sakhe se-4-season eBarca, u-Guardiola akagcini nje ukuqoqa iziqu ze-14, kodwa futhi wakhula isitayela sokudlala esasimangaza abalandeli bebhola emhlabeni wonke. Enye yalezo zitayela ihilela ukuba angaboni izingxoxo zomuntu ngamunye, kodwa cindezela izingqungquthela kuphela.
Ngemuva kwesizini se-2011 / 2012 i-Guardiola yashiya iBarcelona futhi yathi uzoba nomnyaka wesabatha eNew York City. Kamuva kuvezwe ukuthi uzothatha ukubusa eBayern Munich kusukela e-2013 ehlobo.
U-Guardiola unqobe isihloko seBundesliga, I-DFB-Isihloko sezwi, kanye UEFA Iziqu ze-Super Cup ne-Club World Cup ngesikhathi sakhe sokuqala ne-Bayern.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Uthando Lwezithombe Nezobuciko
Ngalesi sideline, u-Guardiola uyaziwa ngokugqoka izikhwama ezincane zokusika. (Ngezinye izikhathi kuncane kakhulu). Akekho oke wakwazi ukuthola ukuthi u-Guardiola uthola izikhwama zakhe, ngakho-ke uma ufunda lokhu, Pep, sicela ungene ku-touch.
Uthando lwePep for Fashion
Akalokwesaba i-pop yombala. Ngesikhathi i-shirt-and-tie-ngaphansi-ebomvu-V-neck ensemble iyisisekelo esikhulu sabameli bebhola lase-European (ie, u-Arsène Wenger, owayengumphathi we-Aston Villa uTim Sherwood), u-Guardiola ubabeka amahloni.
Izingubo ezingalinganiselwe zikaPep Guardiola
Izembatho zakhe ezinjengalezi ngezansi zenze izinhloko esikhathini esidlule. UPep Guardiola ubelokhu ebizwa ngokuthi indoda enhle kunazo zonke ebhola ibhola ngokusho kwezindaba zaseSpain. Umkakhe u-Christina uye wabizwa njengethonya elibalulekile ngemuva kokuphila kwakhe kwemfashini.
Umqondo kaPep Guardiola ophelele wokugqoka
Ekhuluma ngezembatho, ubuhlobo bukaGudiodiola nomkami uCristina Serra bekhula eduze nendawo yokugcina impahla yasekhaya eManresa, eSpain empumalanga-empumalanga.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuya emikhosini yaseBermany Beer
Enye yezinto zokuzilibazisa ezinkulu zikaPep uhambele imikhosi yobhiya. I Oktoberfest Umkhosi webhiya uyintandokazi yakhe. Lena imikhosi yezinyosi ezimbili zezinyosi eziphethwe ngonyaka ngamunye Munich, EJalimane ngasekupheleni kuka-Septhemba nasekuqaleni kuka-Okthoba.
Imikhosi ye-Pep Guardiola ne-Beer
Kukhona abantu abayizigidi eziyisithupha ngonyaka futhi uye waphefumulela izenzakalo eziningi ezifanayo usebenzisa igama Oktoberfest eJalimane nasemhlabeni wonke, eziningi zazo ezazisungulwa abafuduki baseJalimane noma inzalo yabo.
I-Pep Guardiola Beer Advert Commercial
Uthando lwakhe ngemikhosi yezinyosi lenza ukuba avumele isaziso esithile sebhiya kumdlali wakhe wangaphambili weF FC Bayern Munich.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Umbhali wezincwadi eziningi
U-Pep Guardiola ubhale inombolo enhle yezincwadi ezithengiswa e-Amazon phakathi kwazo ukuthi "Isihogo esivela ku-tiki-taka kanye nokuziphendukela kwemvelo". Ukuziphendukela kwemvelo kukhuluma ngezinselele zakhe emisebenzini yebhola coaching futhi kubonisa abafundi ukuthi uyithinte kanjani ukuba abe ngumqeqeshi webhola wezemidlalo ophumelelayo.
Ubufakazi bokuthi uPep Guardiola ungumlobi
Kuye kwakhishwa izincwadi eziningi ezinhle kakhulu ku-Guardiola eminyakeni yamuva, kusukela ku-biographies kuya ku-akhawunti yangaphakathi yesikhathi sakhe eBayern ebhalwe nguMartí Perarnau. Kodwa bewazi ukuthi uPep uqobo naye ungumbhali?
Ku-2001, wakhulula le ncwadi I-meva gent, el meu futbol (abantu bami, ibhola lami) ngokubambisana noLu Martin noMiguel Rico, ababili bezintatheli zezinyawo ezihlonishwa kakhulu eSpain. Ingxenye ye-biography, ingxenye yomdlalo wegeyimu ye-Pep, ngokuqondile emlonyeni wehhashi: kufanelekile uma ufuna ukuqonda i-Guardiola.
Kunezinkinga ezimbili kuphela. Okokuqala ukuthi kutholakala kuphela ngesi-Catalan, futhi okwesibili ukuthi akutholakali, ukuyeka okuphelele. Sekude isikhathi sokushicilelwa, i-Guardiola ayinaso isithakazelo ekuboneni iphinde ishicilelwe, naphezu kokubonakala okusobala ukwenza ipenki enhle.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -I-Autos
I-Pep Guardiola inezinambama zokudla ekukhethweni kwezimoto zakhe. Ushayela i-S8, imoto eyenziwe yi-Audi leyo intengo okwamanje ifakwa ku-$ 170, i-000. Izihluthulelo ze-382-kW (520-hp) emnyama-omnyama i-Audi S8 zanikezwa yona yi-CEO ye-Audi's Rupert Stadler.
I-Car Audi yePep Guardiola
Le moto imenza azizwe ekhaya emgwaqweni.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukholo
U-Pep Guardiola akayona inkolo. Ungumuntu ongakholelwa kuNkulunkulu futhi akakholelwa ekukholweni kukaNkulunkulu. Abantu babelindele ukuthi i-Guardiola ibe okungenani yamaKatolika, njengoba kulindeleke kusuka emaSpain amaningi.
I-Pep iphakathi kwaleyo ngxenye yesilinganiso seSpain esizicabangela yona engeyona yenkolo.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Uthando lweGalofu
Uthando lwezingubo ezihlakaniphile ngokwemvelo luhumusha othandweni lwegalofu.
I-Pep Guardiola Loves Golf
U-Guardiola waya eSikhumulweni se-2012 eMedina "isimemo sePutukezi yaseYurophu yaseRyder Cup noJoseph Maria Olazabal. Ngaphandle kokudlala kwakhe eYurophu, u-Guardiola wachitha isikhathi no-Al Ahly waseQatar futhi uDorados de Sinaloa waseMexico, owafakazela i-swansong yakhe.
I-Pep Guardiola Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Uthando ngoPetru Crouch
Ku-2006, u-Guardiola wabhala uchungechunge lwamakholomu El Pais ngesikhathi seNdebe Yomhlaba YaseJalimane, okuqukethwe okunikeza ukuqonda okuthakazelisayo ngengqondo yakhe yebhola. Enye yezinto ezithakazelisayo kakhulu kulokho kuhilela ukuba ahlasele umdlali oyithandayo kusukela kulo mqhudelwano, ogama lakhe lingase lifike ukumangala: uPeter Crouch.
Ukuhlonipha kukaPep kaPeter Crouch.
I-Carlo Ancelotti Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Januwari 30, 2019
I-Jurgen Klopp Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts